Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Kobaka ambava no betsaka
INTY SY NDAY: Kobaka ambava no betsaka
Tonga nanotrona ny lanonana nankalazana ny tsingerin-taona faha-56-n’ny Fitsarana Tampony teny Anosy omaly ny filohampirenena Rajaonarimampianina. Tena mampody mandry aoka izany ny lahateny nataony izay nanandratany ny lanjan’ny fahaleovan-tenan’ny fitsarana. Nomarihiny fa tsy angatahina io fa efa voasoritra ny Lalàmpanorenana. Dia nampiasain’Ingahy filohampirenena ireo voambolana rehetra fanomezana antoka sy toky ny vahoaka fa « mahaleo tena ny fitsarana ». Aoka hoy izy mba ny feon’ny fieritreretanareo no hibaiko. Momba ny fitsabatsabahan’ny sokajin’olona sasany amin’ny raharaham-pitsarana dia nomarihiny ny hoe « tsy mety tsy hisy izany ». Izany hoe miaiky izy fa misy io fitsabatsabahana io.
Ka rehefa izay fitsabatsabahana izay no tafiditra ao amin’ny raharaham-pitsarana dia ilay fahaleovan-tenan’ny fitsarana mihitsy no tsy voahaja izany.
Iza anefa, hono, no tena mpitsabatsabaka amin’ny raharaham-pitsarana ? Tsotra. Ny olona manana ny fahefam-panjakana sy ny manam-bola.
Tsy iadian-kevitra io. Tsy afaka na hanana fahasahiana hitsabaka amin’ny raharaham-pitsarana raha olom-pirenena tsotra mahantra, tsy mahafantatra olona ambony, tsy manana asisika na anampenana ny mason’ny mpitsara…
Ny manam-bola aloha matetika dia ireo mpanao hosoka sy asa fisolokiana ka matetika dia ny vola azony amin’izany no anombinany iarovany tena mba tsy ho faty manota. Ireo teratany vahiny mihevi-tena ho tsy maty manota koa, toy ny karana manao fandikan-dalàna amin’ny tranga isan-karazany, dia mampiasa vola eny amin’ny fitsarana mba tsy ho voatohintohina. Ireo mpandraharaha mpanao raharaha maloto, kimaizimaizina amin’ny asa fandraharahana ataony koa dia mahita irika hatrany hanakonana ny marina eny amin’ny fitsarana.
Ireo mitana ny fahaefam-panjakana kosa, izany hoe mpitondra fanjakana, no mampiasa izany fahefam-panjakana izany hiarovany ny voninahiny sy ny tombontsoany, ary hiarovany ny olona akaiky azy na manolo-bola azy koa, ka mitsabatsabaka amin’ny raharaham-pitsarana.
Ndeha holazaina àry fa tena mamela sy mampirisika ny mpitsara hampihatra ny tena fahaleovan-tenany ny filohampirenena. Fa ny filohampirenena ve mba efa niteny na nananatra na nandrara na nibedy ny manodidina azy na ny manam-pahefana ara-panjakana tsy hitsabatsabaka amin’ny raharaham-pitsarana ? Tsy eto andrenivohitra ihany ange no manao ny ataony amin’ny fitsarana ny manam-pahefana sy manam-bola fa any amin’ny faritra maro manerana ny Nosy mihitsy koa e !
Fa mba misarika kely ny fisainan’Ingahy Filohampirenena izahay tamin’ny teniny omaly hoe « tsy angatahina fa efa ao anaty Lalàmpanorenana ny fahaleovan-tenan’ny fitsarana ». Iza no mampanaja izany moa, Andriamatoa Filoha ? Iza no miantoka ny fanajana ny Lalàmpanorenana ? Moa ve tena nahavita nanaja an’io Lalàmpanorenana io ara-bakiteny ny filohampirenena ? Matoa izahay manoritra an’ireo fanontaniana ireo dia satria mahita ary mahatsapa fa ny mpitondra fanjakana no voalohany tsy manaja fa tena minia manitsakitsaka an’io Lalàmpanorenana io.
Raha tena misy mpitsara mijoro ka manatanteraka ny asany ao anatin’ny tena fahaleovan-tenany, mamoaka ny didy araka ny feon’ny fieritreretany, moa ve tena tsy hiharan’ny antsojain’ny sasany izy ? Io sasany io, aoka hazava fa olona manana fahefam-panjakana na manam-bola.
Noho izany, kabary ambony vavahady ihany ny nataon’ny filoha omaly teny Anosy fa iarahan’ny vahoaka mahita eto avokoa ange ny zava-misy e !